निमार्ण समितिलाई थाहै नदि ठेकेदार वाट काम, १५ लाख झ्वाम
साउन २५, बाँके । वाँकेको कोहलपुर नगरपालिका ११ वगिया स्थित ज्ञानज्योति माध्यमिक विद्यालयको निमार्णका लागि आएको ३० लाख रुपैया निमार्ण समितिलाई थाहै नदि ठेकेदार मार्फत काम गराई १५ लाख रुपैया झ्वाम पारिएको छ ।
रकम भुकम्पीय सुरक्षा कार्यक्रम अन्तरगत शिक्षा विभाग वाट आएको हो । आथिक वर्ष ०७५।७६ को विद्यालयको भवन ‘रेक्टोफिटिङ’ गर्ने योजनाका साथ १५ लाख रुपैया आएको थियो ।
यस्तै आर्थिक वर्ष ०७६।७७ को लागि पनि विद्यालयको भवन ‘रेक्टोफिटिङ’ मर्मत गर्ने शिर्षकमा १५ लाख रुपैया आएको थियो । १५ लाख त झ्वाम भइसक्यो अव वाँकी १५ लाखलाई पनि विद्यालयमा अलि अलि टालटुले काम गरेर झ्वाम पार्न खोजिएको अभिभावकहरुले गुसानो गरेका छन ।
विद्यालयको २ कोठे पुरानो विद्यालय भवन छदै थियो । त्यही भवनलाई आ.व. ०७५।७६ को रकमले जगवाटै पुरानो पिल्लरको वरिपरी सरीया ,सिमेट,गिट्टी वालुवा राखि पिल्लर मर्मत गरिएको छ । पुरानो भवनलाई टालटुले मर्मतले १५ लाख कसरी सकियो ? स्थानीयले प्रश्न गरेका छन ।
स्थानीयले वडाअध्यक्ष,ठेकेदार,प्रअ र प्राविधिक मिलेर विद्यालयमा अलिअलि काम गरेर रकम पचाएको आरोप लगाएका छन ।
आ.व.७६।७७ को रकमले २ कोठे भवनको माथिल्लो तला ढलान गर्ने योजना थियो ।
तर ढलानको तयारी भइरहको वेला ढलान धान्न नसक्ने भन्दै नगरपालिका वाट गएको प्राविधिक सहितको अनुगमन टिमले वदर गरेको छ ।
यस वारे निमार्ण समितिका अध्यक्ष विर वहादुर शाहीलाई वुझदा आफु प्रक्रियाको लागि मात्र देखावटी निमार्ण समितिको अध्यक्ष भएको वताउनु भएको छ ।
उहाँले म निमार्ण समितिको अध्यक्ष हु तर काम कस्लाई कसरी दिएको हो थाहा छैन भन्नु भयो । निमार्ण समितिको अध्यक्ष शाहीलाई वनाइए पनि त्यो भन्दा अघि नै वडा अध्यक्ष तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कर्ण वहादुर थापाले आफ्नो चिने जानेको नाममा ठेकेदार अजुर्न पनेरुलाई कामको जिम्मा दिनु भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य देविलाल वाहोराले वताउनु भएको छ ।
उपभोक्ता समितिले समेत १ करोड सम्मको काम गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर ३० लाखको कामका लागि समेत वडा अध्यक्षले ठेकेदारलाई जिम्मा दिनु कुनै न कुनै कमिसनको रहस्य भएको छ त्यो गलत प्रक्रिया भएको छ धेरैजसो अभिभावहरुको गुनासो छ ।
वडा अध्यक्ष थापाले भने ठेकेदारलाई कामको जिम्मा निमार्ण समितिले दिएको भन्दै आफ्नो अनियमिताको वचाउ गर्नु भएको छ । विद्यालयको कुल आएको ३० लाख रकम मध्य १५ लाख रुपैया निकासा भइसकेको छ । भवन रेक्टोफिटिङ अन्तरगत जरै देखि मर्मत गर्नु पर्नेमा वनेको छैन ।
उता विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोविन्दराज श्रेष्ठले कामको जिम्मा ठेकेदारलाई दिने निर्णय विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गरेको वताउनु भएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य शाहीले त्यो सवै कुरा झुट्टो भएको र व्यवस्थापन समितिले ठेकेदारलाई जिम्मा दिने निर्णय नगरेको दावि गर्नु भएको छ ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक श्रेष्ठले प्राविधि माधव जोसीले गर्दा पहिला ढलानको तयारी गर्यौ अहिले अनुगमन टिमले हुदैन भन्यो ढलान सेट भत्काउनु पर्ने भयो भन्नु भयो । विद्यालयको भवन अव टिनले छाउने तयारी गरिएको छ प्रअले भन्नु भएको छ ।
प्राविधिक माधाव जोसीले भने प्रअले भने जस्तो नभएको दावी गर्नु भएको छ । प्राविधिक जोसीले विद्यालयको भवनको छेउमा सडक खनेपछि हात्तिपाईले देखियो जग मजवुद वनाउनु पर्छ । ढलान हुदैन अनुगमन समितिले भनेको हो भन्नु भएको छ । स्थानीयवासीले भने कमसल निमार्ण सामाग्रीको प्रयोगले विद्यालयको भवनको पिल्लर चर्किएको र जसले गर्दा ढलान रोकिएको वताएका छन ।
विद्यालय निमार्ण१५ लाख #झ्वाम